Guddiga Joogtada Golaha Shacabka oo kulan ka yeeshay dastuurka (SAWIRRO) – AfmoNews
Guddiga Joogtada Golaha Shacabka oo kulan ka yeeshay dastuurka (SAWIRRO)
Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka ayaa maanta kulan ku yeeshay Xarunta Villa Hargeisa, iyadoo ajandaha kulanka uu ahaa dib u eegista dastuurka.
Kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, waxaana ka qaybgalay Guddiga Golaha Shacabka ee dastuurka iyo Guddiga Madaxabannaan ee dastuurka.
Labada guddi ayaa Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka horkeenay xeer dib loogu dhigaayo dastuurka, Baarlamaanka 11aad ee lagu wado in la soo dhiso horaanta sanadka soo socda ee 2021.
Ka hor inta aan dib loo dhigin xeerkan ayaa waxaa lagu wadaa in la horgeeyo Baarlamaanka 10aad, si uu u ansixiyo qorshaha dib loogu dhigaayo Baarlamaanka 11aad.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee dalka ayaa Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoonka Labada Aqal u diray warqad uu kula socodsiinayo in muddada dhaqangalka Dastuurka KMG uu ku egyahay muddo Xilleedka Baarlamaanka 10aad, iyadoona uu ka digay in dalka uu bilaa dastuur noqdo.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in dhinacyadaasi ay qaadan tallaabooyin looga hortaggaayo in dalka uu dastuur la’aan noqdo.
Xasan Sheekh ayaa Guddoonka Labada Aqal ugu baaqay in ay si wadajir ah shir isugu yimaadaan, ayna ka arrinsadaan dib u eegista dastuurka, oo waajibaadka ugu gudbiyaan Baarlamaanka 11aad.